Gallaini: Ibra Waxa Uu Xiran Doonaa Maaliyada No.10, Thiago Silva-na Lacag La Siisto Ma Jirto. - jornalizem
Gallaini: Ibra Waxa Uu Xiran Doonaa Maaliyada No.10, Thiago Silva-na Lacag La Siisto Ma Jirto.
Adriano Gallaini ayaa shaaca ka qaaday in mustaqbal weyn ay kooxda Milan ku leeyihiin Ibrahimovic iyo Thiago Silva, ka dib markii uu xaqiijiyay in weeraryahanka uu xiran doono xilli ciyaareedka soo socda maaliyada No.10, halka sidoo kale uu soo saaray digniin ku aadan in faraha laga qaado daafaca reer Brazil.
Labada ciyaaryahan ayaa udub dhexaad u ahaa kooxda Rossoneri xilli ciyaareedyadii u danbeeyay, lakiin xaalada dhaqaale ee ay kooxda ku jirto ayaa keentay in ciyaartoydan lala xiriiriyo kooxaha Paris Saint-Germain iyo Manchester City.
Si kastaba, madaxweyne ku xigeenka Milan ayaa haatan shaaca ka qaaday in Ibrahimovic gacanta loo gelin doono maaliyada halyeeyda ah ee No . 10 oo uu hore u xiran jiray Clarence Seedorf, isagoo sidoo kale sheegay in Thiago Silva uusan San Siro ka tagi doonin waqti xaadirkaan.
“Waxaan ka balanqaaday Ibrahimovic maaliyada No. 10, inkastoo aan weli Seedorf kala hadlin mustaqbalkiisa. Thiago Silva waa ciyaaryahan aan lacag u dhigantaa aysan jirin” ayuu Galliani u sheegay suxufiyiinta.
“Ma aanan fahmin sababta ay dadka u dhaleeceynayaan dhaqaalaheena, halka adduunka oo dhan uu ka jiro dhibaato dhaqaale, sidaasi darteed waa inay dadka ka mahadceliyaan dadaalkeena”.
Galliani ayaa markaasi ka dib ka hadlay mustaqbalka ciyaaryahanada Mathieu Flamini iyo Alberto Aquilani.
“Waxaan la xaajoneynaa Flamini, waxa uu iska diiday dalabkeenii hore lakiin waa inuu hoos u dhigaa waxa uu doonayo si anagana aan u aqbalno. Xilligaan la joogo waa in ciyaartoyda ay soo bandhigaan jaceylka ay u qabaan Milan”.
“Aquilani waxa uu leeyahay farsamo iyo tayo aan jecel nahay, lakiin haatan Liverpool ayay jirtaa madaama uu yahay ciyaaryahankooda.”